Amagama wamafayela amade ku-Windows 10 > UVielhuber David
Amagama wamafayela amade ku-Windows 1004
Hhayi kuphela lapho usebenzisa u- npm ngaphansi kweWindows uthola umkhawulo manje osuneminyaka ecishe ibe ngu-30 ubudala, evimbela izindlela eziya kumafolda namafayela afinyelela ezinhlamvini ezingama-255. Lokhu akulona iphutha le-NTFS, kepha i- LFN . Lokhu kuholela izimbungulu ezicasulayo nokungahambelani phakathi kwezinhlelo zokusebenza. Ngezikhathi ze- WSL, lesi yisimo esidabukisayo, ngenhlanhla ukuthi ungazilungisa ngokwakho ebhukwini isikhathi esithile.
Ngisho nakamuva Windows 10 I-Pro 1709 uthola lo mlayezo lapho wenza ifolda / indlela yefayela ende kakhulu:
Ngemuva kokuvuselelwa kwesikhumbuzo seWindows 10 ekugcineni ungawuphakamisa lo mkhawulo. Kufanele wazi ukuthi isoftware endala kungenzeka ingasakwazi ukufinyelela amafayela angaphandle kwalomkhawulo. Akuwona wonke ama-software angama-32-bit athintekayo lapha futhi ungawayeka eze esivivinyweni. Uzulazulela kukhiye nge- regedit
futhi idala (uma ingekho vele) inani le-DWORD (32-bit) LongPathsEnabled bese usetha inani libe ngu-1.
Ushintsho luyasebenza ngemuva kokuqala kabusha. Ngokudabukisayo, i-Windows Explorer engaphakathi ezindlini ayisekeli izindlela ezinde okwamanje (ngethemba ukuthi lokhu kuzoshintsha ngokuzayo). Esikhundleni salokho, ungasebenzisa amathuluzi anamandla kakhulu njenge- One Commander , manje evumela izindlela ezinobude bezinhlamvu ezingama-32767.